Dominica: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Dominica: Yepamutemo COVID-19 Yekushanya Kugadziridza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Dominica Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vakuru vehutano vakaita nekukurumidza kupatsanura vaviri vashandi vengarava vakadzokera kumba musi waMay 27th, 2020. Ichi chiziviso chakaitwa naVa Prime Minister Honourable Roosevelt Skerrit mune pfupi hurukuro kurudzi rwacho muna Chikumi 1st, 2020.
Izvi zvinounza huwandu hwenhamba kusvika gumi nesere. Nyika makumi matatu nenomwe vakadzoserwa kumusha muna Chivabvu 27, 2020, vakaiswa munzvimbo inofanirwa kugara kwavo vega, uye vakaongororwa zvichitevera zvibvumirano zvakagamuchirwa Covid-19.
Nyika dzese dzaidzoka dzakaongororwa COVID-19 zvisinei, makumi matatu neshanu emakesi akaongororwa aive asina hutachiona, nepo vaviri chete vakaongororwa vaine hutachiona.
Vaviri vemunyika avo vachiri asymptomatic vasina kana pre-anga aripo mamiriro ehutano akaiswa ari ega. Vanodzoka makumi matatu neshanu vakayedza vasina, vacharamba vachicherechedzwa kwemazuva gumi nemana.
Sezvo makesi gumi nematanhatu apfuura akabviswa uye akatumirwa kumba, aya maviri ndiwo chete mamiriro ekuDominica anozivikanwa kuve nehutachiona. Ministry of Health, Wellness uye New Health Investment inoenderera mberi nehurongwa hwekuyedza munharaunda yeCOBV-19